Rindrambaiko fanoherana ny loza mitatao | Avy amin'ny Linux
Rindrambaiko fanoherana ny loza mitatao
Una vondrom-piarahamonina virtoaly an'ny mpandrafitra firaisankina mivory amin'ny tanàna samihafa eran'izao tontolo izao ary mamorona fitaovana virtoaly hiadiana amin'ny loza voajanahary. Efa tafiditra ao anatin'ny hetsika i Arzantina.
Nitodika tany amin'i Sendai ny masonay. " Raha jerena mazava ho azy ny zava-doza iainan'i Japana, ity andianteny ity no mitarika ny tranonkala ofisialin'i Hacks Random of Kidness (RHoK), hetsika tsy manam-paharoa teraka tamin'ny hafanan'ny Internet sy ny fanosehana ireo mpandahatra programa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, izay manolo-tena hampivondrona ny hafanam-po nomerika amin'ny hetsika firaisankina. Ny tanjony? Hahafeno ny haavon'ny hatsarana amin'ny lozisialy ampiharina amin'ny fisorohana na fanampiana amin'ny toe-javatra voina. Ny hetsika, izay tohanan'ny Google, Microsoft, ny Banky Iraisam-pirenena ary ny Yahoo, dia miorina amin'ny antsoin'ny mpandray anjara hoe maraton: mandritra ny roa andro, miaraka, mivory ireo mpamorona lozisialy sy manampahaizana manokana amin'ny fitantanana ny loza voajanahary. tanàna isan-karazany eran'izao tontolo izao hamoronana modely rindrambaiko misokatra, zatra ny toe-java-misy ara-jeografika na ara-tsosialy ary ampiharina amin'ny asa maha-olona (famonjena, fanampiana ireo traboina amin'ny horohoron-tany, fanentanana ara-pahasalamana mandritra ny tondra-drano sns. Amin'ny faran'ny marathon dia manadihady ny valim-panadihadiana tsirairay ny vatan'ny manampahaizana iray ary manapa-kevitra hoe iza ny tolo-kevitra mandresy.
Nalefa tamin'ny 2009, ny volana Jona amin'ity taona ity, ny fihaonambe dia hanana ny fanontana fahaefatra, azo inoana fa eo ambany fitarihan'ny hetsika Japoney ary miaraka amin'ny antso mazava ho an'ny vondrona akademika iraisam-pirenena hanatevin-daharana ny tanjona.
Izao tontolo izao RHoK dia efa manana ny zava-bitany haseho. Ohatra, iray amin'ireo fampiharana mandresy tamin'ny hazakazaka marathon jona 2010 tany Washington dia ampiasain'ny Banky Iraisam-pirenena any Karaiba. Ity tolo-kevitra ity dia fitaovana iray ahafahan'ny injeniera mijery an-tsaina ny loza mety hitranga amin'ny tany, hanampiana amin'ny fampandrosoana ireo fotodrafitrasa ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe.
Tamin'ny volana desambra lasa teo, nandray anjara tamin'ny hazakazaka hazakazaka natao tany Buenos Aires i Arzantina, nifanandrify tamin'ireo izay natao ihany koa tany Toronto, Nairobi, Lusaka, Bogotá, San Pablo, Tel Aviv, Birmingham, Mexico City, Juarez, Singapore, Atlanta, Chicago , New York, San Francisco ary Seattle. Amin'ny ambaratonga eo an-toerana, ny tetik'asa nofidian'ny mpitsara dia Yerbus, novolavolain'i Julián Gutiérrez, José Luis Díaz, Mauro Monti, Mariano Stampella ary Santiago Tenti. “Ny fandraisana andraikitra dia sehatra iray izay miasa amin'ny tambajotra sosialy rehetra ary miasa ho toy ny rohy ifandraisan'ny ONG sy ny olona liana amin'ny fiaraha-miasa. Mba hanaovana izany, ny ONG resahina, amin'ny alàlan'ny Yerbus, dia manome baiko an'ireo mpanaraka azy - toy ny sakafo, lamba firakotra na kidoro. Ilay olona maniry hiara-miasa dia tsindrio ilay rohy izay aseho ary mamela ny angon-drakitra misy azy, lasa mpamatsy vola mety. Raha vantany vao manao ilay fanomezana ilay olona, ​​dia mamoaka amin'ny tambajotra sosialy an'ny mpanome ny rafitra misaotra miaraka amin'ny rohy iray hafa manondro fa io olona io dia tao anatin'ny fampielezan-kevitra. Araka izany, avela hanara-maso ny toerana nifaranan'ny fanomezana ny mpamatsy vola, manome mangarahara ny asa rehetra ”, hoy ny fanazavan'i Mauro Monti. Ho azy, i José Domínguez, mpitarika ny Globant (orinasan'ny Buenos Aires RHoK), dia manome toky: «Tanjona ny tetik'asa hamporisihana ny fandraisan'anjaran'ny firaisan-kina amin'ny alàlan'ny fanomezana mangarahara ny fanomezana amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy. Eto amin'ny firenentsika dia olona maro no tsy miara-miasa satria tsy misy rafitra mazava, amin'ity lafiny ity dia afaka manampy ity rindrambaiko ity ».
-Inona koa ny fepetra takian'ity karazana fampandrosoana ity mba hanomezana valiny mahomby amin'ny lozam-pifamoivoizana iray?
"Amin'ny ankapobeny, fitohizana," hoy i Domínguez namaly. Mandritra ny roa andro amin'ilay hetsika dia avoaka ireo prototypes. Noho izany, ilaina ny fitohizan'ireto tetik'asa ireto avy amin'ny vondrom-piarahamonina misokatra na amin'ny Globant Labs.
-Inona ny fanamby lehibe tsy maintsy resin'ny RHoK?
-Manohy manaparitaka sy mampahafantatra an'ity karazana hetsika ity eo amin'ny fiarahamonina. Ny teknolojia dia mety ho iray amin'ireo catalista lehibe indrindra amin'ny famaliana ny loza voajanahary. Amin'ny ho avy dia handrakotra vahoaka betsaka kokoa isika, izay hahafahantsika hanana hevitra, fampiharana ary tolo-kevitra bebe kokoa izay ilaina amin'ny ONG sy governemanta. Anisan'ireo tombony lehibe apetraky ny RHoK ny fananan'ireo ONG sy ireo manampahaizana manokana amin'ny toe-javatra voajanahary voajanahary dia ny vondron'ireo mpanohana fandaharana vonona hanome tanana hiatrika ireo karazana olana ireo.
-Ahoana no hanombatombanana ny fandraisana anjaran'ny Arzantina amin'ity hetsika ity?
-Ny fivoriana ireo dia natao hanomezana vina eo an-toerana, hijerena ireo olantsika manokana. Ankoatra ny fisian'ny loza voajanahary manerana an'izao tontolo izao, mino izahay fa ny harena mitondra azy ireo any Arzantina dia avy amin'ny zava-misy fa afaka jerena lalindalina kokoa ny olantsika ary jereo ny fomba mety hanampian'ny teknolojia an'ireo tranga. RHoK dia manambatra ireo manam-pahaizana momba ny voina eo an-toerana miaraka amin'ireo mpandahatra programa mba hampihatra ny fahalalany amin'ireo olana manokana, fa kosa ny manampahaizana mahita ny fomba fampiasana teknolojia hanafika ny olan'izy ireo. Raha novolavolaina ny rindrambaiko manana kalitao tena tsara hamahana ireo olana eo an-toerana, dia noforonina ny toerana iray hiveloman'ireo mpandray anjara amin'ny alàlan'ny fanaovana izay tiany indrindra.
"Afaka manova an'izao tontolo izao ianao amin'ny faran'ny herinandro iray", hoy ny fanambaràn'ireo mpikarakara mafana ny hackathon-marathon. Ny antenaina rahateo tsy dia tsy ampy. Amin'izao fotoana izao dia efa nahazo ny fisaorana an'i Ban Ki Moon, sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana, izay nanasongadina ny fihetsiny ankoatry ny famoahana ny andraikitry ny haitao amin'ny fikatsahana ny ho avy manerantany.
loharanom-baovao: The Nation Magazine
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Rindrambaiko fanoherana ny loza mitatao
Inona no maha samy hafa ny fihazonana script bash amin'ny fampiasana sh sy ./